कुन ठाउँबाट चुनाव लड्ने तयारी गर्दैछन् शीर्ष नेताहरु ? - आयो खबर
कुन ठाउँबाट चुनाव लड्ने तयारी गर्दैछन् शीर्ष नेताहरु ?
२०७४ भाद्र २७ प्रकाशित ०९:०९
भदौ २७, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन मंसिरका लागि तय भएपछि दलका शीर्ष नेताहरु कहाँबाट चुनाव लड्दैछन् भन्ने’bout चर्चा सुरु हुन थालेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित शीर्ष नेताहरूले संघीय संसद्को निर्वाचनमा लड्ने निर्वाचन क्षेत्रको तयारी थालेका छन् । शीर्ष नेताहरूले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र’bout पार्टीनिकट नेता र निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्तासँग अनौपचारिक परामर्शमार्फत तयारी थालेका हुन् ।
नेता वर्षमान पुन अनन्त रोल्पाबाट उठ्ने तयारी गरेका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए । तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ ९ बाट पराजित भए । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष सुनसरी–४ बाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन् ।
प्रकाशित | २०७४ भाद्र २७ प्रकाशित ०९:०९
मलेसियामा दुई महिनाको अवधिमा ३१ हजार श्रमिक माग
डा केसीको माग पूरा गर्दा कसैको हार नहुने, जनताको जित हुनेः कार्की